Privacy | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Pointstone Total Privacy 6.4.5.300 + Serial Key
အင်တာနက် ကို လုံခြုံ စိတ်ချစွာ အသုံးပြုချင် သူတွေ ရှိထားသင့် တဲ့ Software လေး တစ်ခု တင်ပေး လိုက်
ပါ တယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ Firewall ပုံစံမျိုးပါဘဲ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အ
ဖြစ် Serial Key ကိုပါ ထည့်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Data တွေ Onlineမှာ Register လုပ်ထားတဲ့ Account အားလုံးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချနိုင်
စေဖို့ အတွက် Privacy Suite ကို အသုံးပြုစေ ချင်ပါတယ်ဗျာ။
Windows XP, Vista, 7, 8 နောက်ဆုံးထွက် Version အထိ 32bit & 64bit စတဲ့ OS အားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်
ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါ တယ်ဗျာ။
All this can be accomplished withasingle click on the mouse, or even automatically!With Total Privacy you get total confidence and peace of mind for secure computer use by completely and permanently removing all traces and history of your recent activity.
What’s more, Total Privacy also helps improve and optimize your computer’s performance.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, April 17, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Internet, Privacy, Security